Soo Iibso Heshiiska Xidhmada YouTube - YTpals
Qiimaha Xirmooyinka Kordhinta Fiidiyowga
Qiimaha Xidhmada Kanaalka & Fiidiyowga
Xidhmada 1000 Views
50 jecel $ 7
100 Saamiyada $ 10
Adeegga waxaa loo geyn doonaa ugu badnaan fiidiyow 1.
Xidhmada 2000 Views
100 jecel $ 13
Adeegga waxaa loo qaybin karaa inta u dhaxeysa 1-2 fiidiyow.
Xidhmada 3000 Views
200 jecel $ 20
Adeegga waxaa loo qaybin karaa inta u dhaxeysa 1-3 fiidiyow.
Xidhmada 4000 Views
300 jecel $ 25
Adeegga waxaa loo qaybin karaa inta u dhaxeysa 1-4 fiidiyow.
Xidhmada 5000 Views
400 jecel $ 35
Adeegga waxaa loo qaybin karaa inta u dhaxeysa 1-5 fiidiyow.
Xidhmada 10000 Views
1200 jecel $ 70
Adeegga waxaa loo qaybin karaa inta u dhaxeysa 1-10 fiidiyow.
Xirmada Kanaal Kicinta
1 Qiimeynta Kanaalka $ 120
1 Naqshadeynta Banner Channel $ 60
1 Naqshadeynta Muuqaalka Muuqaalka Channel $ 25
Waxaan u gaarsiineynaa adeeggan 1 kanaal.
6 Xidhmada Fiidiyowyada Fiidiyowga
6 Qiimeyn Video ah $ 150
6 Naqshad Fiidiyowga Fiidiyowga ah $ 130
Waxaan u gaarsiineynaa adeegyadan 6 fiidiyow.
Maxay yihiin faa'iidooyinka iibsashada heshiis xirmo?
Heshiisyada xirmada waxaa loogu talagalay inay isku daraan dhammaan adeegyada ay tahay inaad si wada jir ah ugu wada iibsato natiijooyinka ugu wanaagsan iyo qiimo jaban.
Tusaale ahaan, halkii aad ka iibsan laheyd 5,000 oo aragti, waxaad heli doontaa waxqabadka darajada ugu fiican iyo natiijooyinka muuqaalka dabiiciga marka aad sidoo kale iibsato 400 like, 2000 share iyo 40 comments.
Waxaan isku dareynaa adeegyada saxda ah inaan ku siino natiijooyin wanaagsan.
Waa maxay heshiiska xirmooyinka ugu caansan?
Heshiiska xirmada ugu caansan waa "Xidhmada 5000 Views." Tan waxaa lagu kala qaadi karaa ugu badnaan 1 ilaa 5 fiidyow.
Si kastaba ha noqotee, xirmada aan si weyn ugu talineyno mid kasta oo la iibsanayo waxay ku jirtaa "Qiimaha Xidhmada Channel & Video Optimization Package" waxaana loo yaqaan "Xidhmada Channel Optimization Package."
Haddii aad dhab ka tahay guushaada YouTube, waxaad u dhaqaaqi doontaa boodbood weyn adigoo noo ogolaanaya inaan qiimeyno kanaalkaaga, waxaan kuu sheegi doonaa sida saxda ah ee aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho oo aan ku siino sawirro xirfadeed si aad u siiso kanaalkaaga muuqaalka "weyn ee YouTuber".
Ma bixisaa heshiisyo xirmo kale?
Waxaan diyaarin karnaa heshiisyo xirmo qaas ah. Haddii aad rabto inaad isku dardarto oo aad isbarbar dhigto adeegyada kale, ama aad kordhiso tirada adeegyada qaarkood, si fudud nala soo xiriir oo noo soo sheeg adeegyada saxda ah iyo tirada adeeg kasta oo aad rabto inaad isku darto. Waxaan ku siin doonaa dalab qaas ah.